Kubata Makumbo PaWheelchair
Kukwira kukombama kana a ramp haisi kuwanikwa.
Isu hatisi kuregerera kana kukurudzira kusvetuka kumusoro kwema curbs kana kudzika curbs, urwu rwungori rumwe ruzivo maererano nenyaya.
Kusvetuka Curb pane a hwiricheya
Kune mamwe matipi uye manomano ayo munhu wese aripo hwiricheya-bound inofanirwa kuziva kana zvasvika pakubuda mumugwagwa. Kana pasina iyo hwiricheya ramp zviripo, unofanirwa kudzidza kusvetuka kukwira pasina rubatsiro nekuti nekuti zvikasadaro uchafanira kuvimba nevamwe kuti vasimuke kana chipingamupinyi.
Kunge zvese zvimwe zvinhu, uine ruzivo rwakawanda iwe unogona kuwana zvirinani pakubata a hwiricheya kukwira kumucheto. Kusvetuka mudenga kwakanyanya kuomarara pane kusvetuka pasi, izvi imhaka yekuti urikunyatso kuyedza kushandisa simba uchisvetuka, kana iwe uchisvetuka pasi iwe uri kuyedza kudzikisira huwandu hwesimba panguva yekusvetuka.
Kubata ma curbs pane a hwiricheya inoda kuti mushandisi azive kuti ndeapi kona kusvetuka uye riini chaizvo kuti aite kusvetuka. Kana iwe ukasvetuka uye bhalansi yako yadzimwa, zvinogona kuve nenjodzi nekuti iwe unogona kukanda pamusoro uye kuwira pamusoro wako.
Kubata Curbs PaA hwiricheya
hwiricheya vashandisi vanogona kushandisa maoko avo vanogona kubata kusvetuka kumusoro kwechuru kana kudzika kwembambo. Kana iwe usina kudzora kwemaoko ako nemaoko, saka ichi hachisi chinhu chaunofanira kuedza zvachose. Muchengeti anofanira kunge aripo paanenge achiedza kudzora chinja, kana mushandisi achida kuti muchengeti.
Kutanga kudzidziswa maitiro ekubata mac curbs, iwe unofanirwa kutanga nemadiki madiki curbs pane makuru. Iwe unofanirwa kuwana ruzivo kusvetuka kumusoro uye pasi zvakadzika kwazvo curbs / migwagwa usati waedza chero chinhu chakakura. Ukazviita kwechinguva unotanga kunzwa kuti ungakwakuke sei kuvhara. Izvi zvinokugonesa iwe kuti unzwe chiyero chaunoda kuva nacho uye mune chinzvimbo chipi chaunofanira kuedza kubata kudzora.
Kuedza kubata curb kunoda kuti mushandisi ave neanokwanisa kuyera paari pa hwiricheya. Izvo zvakakoshawo kuti mushandisi ayedze uye adzidze maitiro ekuita "mavhiri" kuitira kuti uve neruzivo rwekuenzanisa muviri wako. Iwe unogona kushandisa iyo "wheelie" hunyanzvi kukwira nzira kana masitepisi, asi iwe unofanirwa kungwarira nguva dzese dzekutsveta neshure uchiyedza iyo wheelie.
Chiitiko neKubata maCurbs PaA hwiricheya
Kudzidza maitiro "wheelie" pane a hwiricheya ndicho chinhu chekutanga chaunofanira kudzidza kuitira kuti uve neruzivo usati wabata curb. Paunenge uchitungamira kusvika kumharadzano unofanirwa kuunza kumberi usati wasvika pamharadzano kubvumidza kukwira kuri nyore kwenzvimbo. Chikamu chekutanga checheya kuti usvike kumucheto ndiko kumashure uku uchiita wheelie, ipapo kumberi kunotevera kana iwe yose the wheelie.
Iri peji rinogona kutumidzwawo se "kubata curbs pane a hwiricheya nemavhiri ”, nekuti iyi nzira yekusvetukira kumusoro chipingamupinyi kana kumisa inoda ruzivo uye ruzivo rwekuita vhiri pachigaro chako.
Kudzivirira kubva pakudonhera kumashure nekukonzera kuipa, unofanirwa kusendamira muviri wako kumberi uchiedza kukwira nzira. Izvi zvinodzivirira yako muyero uye huremu kubva kutakura simba kuenda kumashure kwechigaro.
Paunenge uchiedza kukwira nzira, zvakakosha kuti utakure kumberi usati wasvika pamuromo wetsika. Paunosvika pamuromo wemugwagwa unoda kupopota kumberi kwe hwiricheya pasekondi yekupedzisira usati warova mugwagwa.
Mawiricheya anogadzirirwa kubata migwagwa nemigwagwa.
Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve yedu nyowani hwiricheya.
Dzidza maitiro e wheelie
Iwe unofanirwa kuwana ruzivo rwekuita mavhiri usati waedza izvi.
Iwe unoda wiricheya kuti uedze izvi.
Unogona kungoedza izvi pazvigaro zvemwenje kana zvigaro zvisina kuomarara, hazvikurudzirwe pazvigaro zvinorema.
Inoshanda Kudzivirira-Kukwira Rubatsiro rweWiricheya-Yakasungwa Paraplegic
Kuenda Kumusoro Uye Pasi Kudzikira MuWiricheya? - Kufamba
Kubata Curbs muWheelchair - Supersan.net
Maitiro Eku Pushira Wiricheya Kumusoro uye Kudzika Ramp
Kubata Makoramu muWheelchair - Miedzo Yezvinodhaka